Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah -
Shirkadda Xubinta Khaaska ah
Waxa aad na siiso
Macluumaadka Waanu Uruurinnaa
Isticmaalka Xogta La Uruuriyay
Sida aan u Ilaalineyno Macluumaadkaaga
Xeerka Guud ee Sharciga
Xaggee Loo Yaabaa Inaan Dajigno Warbixinta
Suufintii ugu dambeysay: 24 May 2018
Macluumaadkaagu wuxuu muhim u yahay annaga oo ah adiga iyo adiga naga go'an inaan ilaalino macluumaadkaaga. Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu sharxayaa macluumaadka macluumaadka shirkadda shirkada ah ee ururiya, sida ay u ururiso macluumaadkaaga iyada oo loo marayo hababka kala duwan ee dijitaalka ah iyo sida loo isticmaalo macluumaadka la ururiyey. Waxaa lagaa codsanayaa inaad dib u eegto Nidaamka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ka hor (i) adoo isticmaalaya Codsiyada Shirkadda CompanyHub / Mobile, (ii) helitaanka iyo diiwaangelinta shirkadda websitehub.com iyo / ama (iii) adigoo isticmaalaya wax kasta iyo dhammaan goobaha la xiriira, codsiyada, adeegyada iyo qalabka , iyadoon loo eegin sida aad u gasho ama u isticmaasho. Ujeedada fahamka wanaagsan, codsiga shirkadda shirkadda, shabakadda iyo dhammaan boggaga la xidhiidha, codsiyada, adeegyada iyo qalabka ayaa lagu darayaa si wadajir ah 'COMPANYHUB PLATFORM'.
Waxaanu kuugu soo bandhigi karnaa awoodda aad kula xiriiri karto ama u adeegsan karto shirkadda CompanyHub adoo adeegsanaya shabakada internetka. Qodobada Siyaasaddaan Khaaska ah ayaa lagu dabaqayaa dhammaanba shabakadahan iyo adeegsiga shirkadda shirkadda CompanyHub.
By helitaanka shirkadda CompanyHub iyo by bixinta macluumaadka codsaday, aad u ogolaato Siyaasadda Khaaska ah. Waxaanu xaq u leenahay inaanu wax ka bedelno ama isbedel ku habboon ku sameyno Nidaamka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti ka waqti, kaas oo noqon doona wax ku ool ah marka uu dhajinayo. Waxaan kugula kici doonaa adiga oo keliya kiisaska halkaas oo ay jiraan isbaddallo waawayn oo ku wajahan Siyaasaddaan Khaaska ah. Isticmaalkaaga joogtada ah ee shirkadda CompanyHub, ka dib markii helitaanka cabsida noocan oo kale ah, waa in loo tixgeliyaa sida aqbalaaddaada aad u aragto isbedelada.
Sheyada iyo Adeegyada ay bixiso Shirkadda CompanyHub looma diro shaqsiyaadka da'doodu ka hooseyso 13-jir (13). Haddii aad tahay qof da 'yar, waxaan kaa codsaneynaa inaadan wadaagin macluumaadka shakhsi ahaaneed ama aan isticmaalno alaabta iyo / ama Adeegyada.
Waxaan soo aruurineynaa macluumaadka aad na siisid ama noo ogolaato inaan helno. Macluumaadka waxaa ku jiri kara laakiin aan ku xaddidneyn magacaaga, sawirka, taariikhda dhalashada, iimaylka iyo / ama cinwaanka jirka, telefoonka iyo / ama lambarka telefoonka, jinsiga, liiska xiriirka, macluumaadka warbaahinta bulshada iyo profile, goobta (GPS) macluumaadka, waxqabadka iyo waxqabad macluumaadka iyo marka macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan qaababka lacag bixinta / kaararka deynta / xisaabaadka bangiga. Waxaad qiraysaa inaad adigu si toos ah u soo bandhigeyso macluumaadkaan. Haddii aadan rabin inaad sheegto macluumaadkaan, oo aad xor u tahay inaad sameyso, waxaa suurtagal ah in aadan awoodin inaad ka faa'iideysato adeegyada qaarkood ee ay bixiso Shirkadda CompanyHub.
Waxaan si toos ah u soo aruurin karnaa noocyada macluumaadka soo socda si ay kuu siiyaan isticmaalka iyo helitaanka shirkadda CompanyHub, iyo inaad naga caawiso shakhsiyaadka iyo hagaajinta khibradaada:
Macluumaadka ku saabsan kombiyuutarkaaga ama qalabka aad ka heli karto shirkadda CompanyHub, Cinwaankaaga IP, browser, browser browser, nidaamka hawlgalka, gudbin, shabakad mobile, muuqaalka bogga, macluumaadka ad
Macluumaadka aad bixiso si aad ugu qorto ogeysiisyada kala duwan sida waraaqaha soo socda, hawlaha maalinlaha ah, ogeysiinta shaqada, xusuusinta hawlaha, ogeysiisyada soo dhoofinta xogta, ogaysiisyada isbeddelka, qaansheegadka iyo / ama waraaqaha sida magaca, emailka iwm.
Macluumaadka la xiriira wax iibsi kasta iyo macaamilo aad ka soo gasho shirkada shirkadda CompanyHub sida magaca, cinwaanka, cinwaanka iimaylka, taleefanka, faahfaahinta kaadhadhka iwm.
Macluumaadka ka socda nidaamyada aad ku xiran tahay shirkadda CompanyHub sida xisaabahaaga emailkaaga, jadwalka. Haddii aad noo ogolaato in aan galno Google / Other Email Account, waa inaan wada xariinno emailkaaga ugu dambeyn lixda bilood (6) laga bilaabo taariikhda ogolaashaha oo aad sii wadayso inaad joojiso intaad ka saarto koontada emailka. Nidaamyadeena ayaa markaa falanqeyn doona emaylkan iyo kala soocida xiriirada muhiimka ah ee ku saleysan wada-hadalada email-kaaga iyo sidoo kale xiriiriyaasha emaylka xiriirka.
Waxaan sidoo kale laga yaabaa inaan macluumaad ka soo aruurinno ama kuugu sheegno siyaabo kale, sida markaad la xiriirto kooxdayada taageerada macaamiisha, markaad ka jawaabto sahan iyo / ama inta lagu jiro isdhexgalkaaga xubnaha xubnaheena iibka iyo suuqgeynta ama kooxaha taageerada farsamada. Waanu kormeeri karnaa ama diiwaan gelin doonaa wada hadalka telefoonka ee adiga ama qof kasta oo ku matalaya magacaaga iyo shaqaalahayaga taageerada ujeedooyinka gudaha iyo tababarka. Adoo nagula soo xiriiraya, waxaad qireysaa in isgaadhsiintaadu ay tahay mid aad u badan, la kormeero, ama la duubo iyadoon ogeysiis dheeri ama digniin.
Anaga (oo ay ku jiraan shirkadaha aan la shaqeyneyno) waxay ku qori karaan faylasha xogta yar ee kombiyuutarkaaga ama qalab kale. Faylasha xogtaasi waxay noqon karaan cookies, boorsooyinka pixel, macmacaanka webka (shabakadaha webka waa sawirada elektarooniga ah kuwaas oo loo isticmaali karo emailada la raadin karo) ama kaydinta kale ee degaanka ee ay bixiso bartaada ama codsiyada la xidhiidha (wadajir ahaan "Cookies"). Waxaan u isticmaalnaa Kukiyadaas si aan u aqoonsano sida ganacsade; Aqoonsiga adeegyadayada, content, iyo isgaarsiinta; cabbiraan waxtarka isgaarsiinta; kaa caawiyaan sidii loo hubin lahaa in xisaabtadaada xisaabtarku aanay wax khatar gelin; yaraynta khatarta iyo ka hortagga khayaanada; iyo in lagu dhiirigeliyo kalsoonida iyo nabadgelyada boggayaga iyo adeegyadeena.
Si looga caawiyo in lagaa ilaaliyo khayaanada iyo si xun u isticmaalka macluumaadka shakhsiyadeed, xirfadlahaaga iyo ganacsigaaga, waxaanu ururin karnaa macluumaadka ku saabsan adiga iyo isdhexgalkaaga boggeena internetka ama adeegyadda shirkadda Corporate Platform. Waxaan sidoo kale qiimeyn karnaa kombiyuutarkaaga, telefoonka gacanta ama qalab kale oo aad ku heli karto si aad u ogaato wax kasta oo software ama xamaasad xun.
ISTICMAALKA MACLUUMAADKA LA WADAAGO
Ujeedada ugu muhiimsan ee ururinta macluumaadka shakhsiyeed, xirfadeed iyo ganacsiga waa inay ku siiyaan khibrad ammaan leh, siman, karti leh, oo khibrad u leh CRM. Macluumaadka shakhsiyeed ee nala soo gaadhay iyada oo loo marayo websaydheena waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya:
Shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed shirkaddaada;
Bixi taageerada macaamiisha;
Akhbaarta hirgelinta iyo ogeysiisyada soo dir / casriyeynta / xusuusiyeyaasha ku saabsan kulamadaada / xiriirkaaga;
Xallinta khilaafaadka, ururinta khidmadaha, iyo dhibaatooyinka dhibaatooyinka;
Ka hortag dhaqdhaqaaqyada suurtagalka ah ee sharci darrada ah ama sharci darrada ah, iyo hirgelinta Shuruudaha Isticmaalka
Kala habeyn, cabiraan, iyo hagaajinta adeegyada Hawlaha Shirkadaha ee shirkada shirkada "Corporate Platform" iyo content, layout, iyo hawlgalinta boggayaga internetka, interfaces, qalabka iyo codsiyada;
Bixinta sheyda la beegsanayo, suuq-geynta, ogaysiisyada cusbooneysiinta adeegga, iyo bandhigyada xayeysiinta oo ku saleysan doorbidkaaga isgaadhsiinta;
Kala xiriirida lambarka taleefanka gacanta ee aad adigu bixiso, adigoo kuugu yeeraya wicitaan ama codka (SMS) ama fariin email;
Soo dir bayaannada, qaansheegtooyinka, bixinta lacag-siinta adiga iyo lacag kaaga qaado
BADBAADADA IYO SHARCIYADA MACLUUMAADKA
Waxaanu ku kaydineynaa oo hannaaneynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed annaga oo codsigeena lagu martiqaaday inay ku jiraan "Amazon Cloud" heer sare ah. Xogta martigelinta go'aaminta goobta waxay had iyo jeer ku salaysan yareeyaan latency iyo helitaanka waxqabadka ugu wanaagsan adiga iyo dadkaaga isticmaala. Waxa kale oo aanu haynaa meheradahayaga diiwaan gashan liisamada ku habboon si loo xaqiijiyo ammaanka internetka. Waannu ilaalinaynaa macluumaadkaaga iyada oo la adeegsanayo tallaabooyin badbaado jidheed, farsamo, iyo amniga ah si loo yareeyo halista lumitaanka, si xun u isticmaalka, helitaanka aan la oggolayn, bixinta iyo isbeddelka. Qaar ka mid ah hababka aan u isticmaalno waa ammaanka iyo macluumaadka sirta ah, kontaroolida jireed ee jiritaanka xarumaha xogta nalalka, iyo koontaroolka akhbaarta macluumaadka.
Ma iibinayno ama aan kireeyno macluumaadka shakhsi ahaan, xirfadle ah iyo ganacsigaaga dhinacyada sadexaad ee aan loo ogoleyn ujeedooyinkooda suuqgeyn iyaga oo aan ogolaansho cad. Waxaan isku dari karnaa macluumaadkaaga macluumaadka aan soo uruurinno oo aan u isticmaalno si aan u hagaajinno loona shaqsiyee shirkadda CompanyHub Platform. Sida caadiga ah, waxaan isticmaalnaa oo shaacineynaa macluumaadkaaga sida aan rumaysanahay in loo baahan yahay: (i) Sharciga khuseeya, ama xeerarka lacag bixinta; (ii) si loo hirgaliyo shuruudaheenna iyo shuruudaheenna; (iii) Inuu ilaaliyo xuquuqdeena, asturnaanta, amniga ama hantida, iyo / ama kuwa ka mid ah asxaabteena; iyo (iv) in ay ka jawaabaan codsiyada maxkamadaha, hay'adaha sharci fulinta, hay'adaha sharci dajinta, iyo hay'adaha kale ee dowladda iyo dawladda, oo ay ku jiraan masuuliyiinta ka baxsan dalkaaga hooyo.
Waxa laga yaabaa in aan la wadaagno macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee dhinacyada saddexaad oo la isku halleyn karo sida
Xubno ka mid ah shirkadeena waalidiinta iyo shirkadaha hoos yimaada (si wadajir ah qoyskeena shirkad ahaan) si ay u siiyaan walxo isku dhafan, badeecooyin, iyo adeegyo (sida diiwaangelinta, dhaqdhaqaaqa iyo taageerada macaamiisha), si ay u caawiyaan ogaanshaha iyo ka hortagga falalka sharci darada ah iyo xadgudubyada siyaasadeena. Xubnaha qoyskaagu waxay isticmaali doonaan macluumaadkan si ay kuu soo diraan isgaarsiinta suuqgeynta kaliya haddii aad codsatay adeegyadooda.
Waxaan la wadaagnaa xogta hay'adaha adduunka oo dhan ee aynu xakameyno, nala xakameyno, ama aan ku wada jirno kantaroolkeena caadiga ah, si aan u bixino adeegyadayada.
Waxaan wadaagnaa macluumaadka bixiyeyaasha adeegga kuwaas oo naga caawiya inaan bixino adeegyadayada. Bixiyeyaasha adeegga ayaa naga caawiya waxyaabaha sida bixinta lacag bixinta (tusaale bixiyeyaasha lacag bixinta, gawaarida lacag bixinta), bogga martigalinta, falanqaynta xogta, tignoolajiyada macluumaadka iyo kaabayaasha la xidhiidha, adeegga macaamiisha, bixinta emailka, iyo xisaabinta iwm. , sida ka hortagga musuqmaasuqa, suuq-geynta, iyo adeegyada tignoolajiyada. Qandaraasyadayadu waxay xustay in adeeg bixiyayaashu ay kaliya u isticmaalaan macluumaadkaaga ku saabsan adeegyada ay noo qabtaan oo aysan aheyn faa'iidadooda gaarka ah ama xadgudub ku ah siyaasadeena asturnaanta.
Iyadoo la hirgelinayo sharciga, saraakiisha dawladda, ama qaybaha kale ee saddexaad sida waafaqsan amar maxkamadeed, amar maxkamadeed, ama nidaam kale oo sharci ah ama shuruudaha ku haboon ama annaga oo ka mid ah kuwa la shaqeeya; marka aan u baahannahay inaan sidaas yeelno si aan u hoggaanno sharciga; ama marka aynu rumaysan nahay, anagoo tixgelinno kali ah, in siidaynta shakhsiyaadka, xirfadlaha iyo ganacsiga ay lagama maarmaan tahay si looga hortago waxyeelo jireed ama khasaaro dhaqaale, si loo soo sheego waxqabadyo sharci darro ah ama lagu baaro xadgudubyo kale.
Waxaad xor u tahay inaad na weydiisatid wakhti kasta oo wax ka bedelaya, beddelaya iyo / ama tirtirista / ereyada macluumaadkaaga nagu xafiday annaga adigoo u diraya email udir support@companyhub.com. Waanu xallin doonnaa mid kasta oo ka mid ah codsigaaga, iyada oo ku xiran siyaasaddayada dib u dhigista sida hoos ku xusan,
Waxaad xor u tahay inaad diido kakeegashadayada haddii shaashaddaada ama browser-kaaga lagu daro ogolaansho, haddii aan Shuruudaheena loo baahnayn si looga hortago khiyaano ama xaqiijiyo ammaanka bogagga internetka ee aan xakameyno. Si kastaba ha noqotee, hoos u dhigista Kukiyada our naga horjoogsan karto isticmaalkaaga internetka iyo / ama adeegyadayada.
Haddii aadan dooneynin inaad hesho wareysiinteena suuq-geynta ama ka-qaybqaadashada dukumintiyadayada, raacno tilmaamaha laga yaabo in lagu bixiyo isgaadhsiinta si looga fogaado isgaarsiinta sida mustaqbalka.
Iyadoo aan loo eegin codsigaaga si loo tirtiro macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ka imaanaya xafiisyadayada, waxaa laga yaabaa in aan ku hayno xogta shakhsiyeed wakhtigaas oo ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo waajibaadkeena sida ku xusan Shuruudaha Isticmaalka illaa muddada dheer ee loo baahan yahay ama sharcigu ogol yahay, Waxaan soo buuxineynaa waajibaadkayaga lagu sharraxay Siyaasadda Khaaska ah mar walba. Wixii nala soo xiriiri kara wixii su'aal ah ee arrintan ku saabsan.
Isticmaalka alaabta iyo adeegyadeena, iyo wixii khilaafaad ah ee ka imanaya iyaga, waxay ku xiran tahay Siyaasaddaan Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka. Fadlan booqo Shuruudaha Isticmaalka, kaas oo sharaxaya shuruudaha kale ee xukuma isticmaalka alaabta iyo adeegyadeena.
Adiga oo aqbalaya siyaasadan, waxaad ogolaatay siyaasadaha ururinta xogta, siyaasadaha sii-haynta iyo isticmaalka siyaasadaha cookie sida ku qeexan siyaasaddan. Wixii su'aalo ama walaac, fadlan kala xiriir Adeegyada Macaamilka / Asturnaanta taageero@companyhub.com.